Soomaaliya oo ka mid noqoneysa dalal ciidamo nabad ilaalin ah u diraya dalka Koonfurta Sudan | Weheliye Online
Soomaaliya oo ka mid noqoneysa dalal ciidamo nabad ilaalin ah u diraya dalka Koonfurta Sudan
War qoraal ah oo ka soo baxay Urur gobolleedka IGAD ayaa lagu sheegay in dalalka Jabuuti iyo Soomaaliya ciidamo nabad ilaalin ah u dirayaan dalka Koonfurta Sudan si loo ilaaliyo hergalinta heshiiskii dhawaan dowladda iyo mucaaradka ay ku kala saxiixdeen magaalada Addis Ababa.
IGAD ayaa sheegtay ciidamadan in ay noqon doonaan kuwo damaanad qaada ilaalinta xasiloonida iyo amniga, iyada oo IGAD dhaqaalaha ku baxaya ciidamada ay weydiisan doonto Qaramada Midoobay.
Urur gobolleedka ayaa sheegay in dhinaca Soomaaliya laga sugayo in ay aqbalaan codsiga uga yimid IGAD, si ay Soomaaliya uga mid noqoto ciidamada halkaa u tagaya nabad ilaalinta.
War-murtiyeedka ayaa lagu yiri “Waxey go’aan ku gaartay IGAD in ay kala shaqeyso golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey in ciidama nabad ilaalinta oo ka socda gobolka si buuxda loo geeyo, si ay u fuliyaan howsha loo igmaday qaab waafaqsan qaraarada golaha ammaanka ee 2304/16 iyo 2406/18 waxaana la codsan doonaa in dib u eegis lagu sameeyo howlaha loo igmaday”.
Hasse ahaatee dhinaca kale marka aad eegto Soomaaliya waxaa jooga ciidamo ka kala socda dalalka qaarrada Africa oo ilaaliya xarumaha iyo hay’ddaha kala duwan dowladda ka qeyb-qaadanaya dagaalka ka dhanka ah Al-shabaab, madaama ciidamada Soomaaliya lagu tilmaamo kuwo aan u diyaarsaneyn in ay hantaan guud ahaanba amniga dalka.
Haddii ay xukuumadd Soomaaliya aqbasho codsiga uga yimid Urur gobolleedka IGAD waxaa loo baahnaan doonaa in la horgeeyo qorshahan xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya si loo helo ogolaasho buuxda.
Previous articleAkhriso:warar dheeraad ah oo kasoo baxaya dagaal ka dhacay Gobolka Gedo
Next articlewali halkeedi ayeey kasii socotaa Xilal iska qaadistii mas’uuliyiinta Galmudug iyo mas’uulinta xilka laga qaaday oo kasoo hor jeysta